6 Mawduucyada WordPress ee ka jawaab celinta Bilaashka ah ee Wargeyskaaga Dijital ah | Abuurista khadka tooska ah
6 Mawduucyada jawaabta bilaashka ah ee joornaalkaaga dhijitaalka ah
Lua louro | | Dulucda, WordPress
Hadaad rabto inaad fuusho a joornaal ama joornaal dijitaal ah, shaki la'aan waa inaad ku abuurtaa iyadoo la kaashanayo maareeyaha maaddada. Maamulaha waxyaabaha kujira heer sare, waa WordPressIn kasta oo ay u soo muuqatay hal madal oo kale oo lagu abuuro baloogyo, haddana isticmaalkeedu wuu sii fidayay (sidaa awgeedna, waxa uu sifaynayay dhinacyo badan) barta bogagga. Sidaa darteed, kani waa maamule maaliyadeed oo ay tahay inaadan iska indha tirin markaad abuureyso boggaaga.
Qoraalkan waxaan ku siineynaa falanqeyn yar, oo ay weheliso xiriiriyaha soo dejinta, ee 6 shebekadaha jawaabta leh o mawduucyada jawaabta bilaashka ah markaa waad bilaabi kartaa adigoon sameyn maalgashi ballaaran. Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay sameynta iyo in mowduucyadan, gaar ahaan loogu talagalay joornaalada ama joornaalada, ay adiga waxtar kuu leeyihiin.
6 Mawduucyada jawaabta bilaashka ah
Musica: Mawduuc xiiso leh oo 4-tiir jawaab ah oo xallin doona baahiyaheenna aasaasiga ah marka la samaynayo wargeys. Waxaan haynaa mashiin raadin gudaha ah, suurtagalnimada in lagu daro bogagga ku jira menu-ka weyn marka lagu daro qaybaha maqaalka, dhinaca midig ee ugu akhriska badan, farriimaha ugu dambeeyay ee akoonkeena Twitter, iwm Sida aagga bartamaha, slider xiiso leh si loo muujiyo wararkii ugu dambeeyay iyo seddex tiirar oo cagihiisa ku yaal oo qoraalladu isku dhex yaalliin. Intaa waxaa dheer, waxay ku tilmaami doontaa cinwaanka ah cimilada la qiyaasay aagga juqraafiyeed ee akhristaha ku yaal iyo heerkulka.
WPHerald Lite: Waxaa loola jeedaa, qaab dhismeedkeeda, a naqshad casri ah ka badan template hore. Faa'iidada ugu weyn ee ay ka leedahay waa jiritaanka laba menus (kan ugu sarreeya, oo leh xiriiriyeyaal ku saabsan hawlgalka bogga sida kooxda tifaftirka, rukhsadaha, xayeysiinta, fikradaha, iwm.) Iyo mid weyn oo leh qaybo u gaar ah. Intaas waxaa sii dheer, duub duuban oo wata wararkii ugu dambeeyay ayaa lagu soo bandhigaa hoosta liiskaan. Waxa kale oo ay ku jirtaa mashiinka raadinta gudaha iyo isku xirka shabakadaha bulshada. Waxaa lagu gartaa miyirqab midabada.
Madhan: Mawduuc saddex-sadar ah, oo leh miyir-qab aan ka yarayn kii hore. Xarrago, way leedahay hal menu oo muhiim ah. Dhinaca midig waxaan ka heli doonnaa astaamaha bulshada, mashiinka raadinta gudaha, faallooyinkii ugu dambeeyay ee ku yaal bogga iyo qodobbadii ugu dambeeyay. Aagga ugu weyn ee blogka, qodobbada. Waxaan wax ka beddeli karnaa qaabka bogga oo dhan iyo midabada, iyo waxyaabo kale.
dhex-dhexaad ah: Ka xarrago yar Emptilium, waxay u qaybisaa waxyaabaha ku jira saddexda qaybood waxayna u oggolaaneysaa laba menu, midka kore (bogga waxqabadka) iyo midka ugu weyn. Tus isdabajooga wararkii ugu dambeeyay kahor intaanan arkin waxa kujira. Qodobbada waxaa lagu habeeyay shaashadda iyaga oo xusuusinaya bilicsanaanta tumblr.
Hueman: aan rasmi ahayn marka loo eego kuwii hore, waxay ka kooban tahay laba menu (kor iyo weyn). Iyada oo leh seddex sadar, waxay daryeeshaa qaabka qoraalka waana ku raaxeysaneysaa marinka bogga. Waxaa ku jira astaamaha bulshada labadaba kor iyo hoos iyo mashiinka raadinta gudaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Dulucda » 6 Mawduucyada jawaabta bilaashka ah ee joornaalkaaga dhijitaalka ah
Waad ku mahadsantahay wadaagista. Waxaan jeclaan lahaa inaad u fiirsato warkaan, joornaalka la xiriira WordPress ee la yiraahdo Xarago
Waxay leedahay astaamaha soo socda sida,
~ Bogga Guriga oo Si Buuxda Loo Fidiyay
~ 15 + qalabka wax lagu dhejiyo
~ 10 + Mawduuc Gaaban
~ Gallery iyo fiidiyowga qaabdhismeedka taageerada iyo waxyaabo kale oo badan ...